नेप्से ९ अंकले घट्यो, कारोबार ४५ करोड - Aarthiknews
विहीबार, ०९ माघ २०७६ Thursday, 23 January, 2020
नेप्से ९ अंकले घट्यो, कारोबार ४५ करोड
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा ९ दशमलव ९२ अंकले घटेर १ हजार २ सय ३८ दशमलव ५६ को बिन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । त्यस्तै गरी ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको मापन सेन्सेटिभ परिसुचक १ दशमलव ९६ अंकले घटेर २ सय ६८ अंकको बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यसदिन १ सय ६६ कम्पनीको १८ लाख ७७ हजार ५४२९ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भई ४५ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबारमा सबैभन्दा बढी रसुवागढी हाइड्रोापावरको भएको छ । जसको कारोबार आज ९ करोड ७६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
यस दिन सर्वा्िधक कमाउनेमा सपोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । जसको शेयर मूल्यमा ५ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ । साथै सर्वा्िधक गुमाउनेमा रसुवागढी हाइड्रोापावर कम्पनीका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । जसको शेयर मूल्यमा ९ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन १२ वटा उपपरिसुचकहरुमा सबैभन्दा समुहहरुमा रातामै छाएका छन् । सबैभन्दा बढी घट्नेमा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेको छ । जसको ७५ दशमलव ४३ अंकले घटेको छ ।
अर्को क्यापिटलले धितोपत्रको कारोबार गर्ने अनुमति पायो
यसरी हुन्छ, अहिले शेयरबजारमा चलखेल
झिनो अकंले बढ्यो नेप्से
मल्टीपर्पस फिनान्सको शेयर लिलामी माघ ७ गते खोल्दै
मापसे गर्ने चालक अब हिरासतमा बस्नुपर्ने
आफ्नो सजिलोका लागि अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउँदै छ सरकार
यी दुई लघुवित्त पनि गाभिने भए
सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्स प्राप्ति गर्ने
उपत्यकाको सडक यसै महिनाभित्र सुधार
'मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रारुप छिट्टै ल्याइने'
आइफोन बोक्ने सपना छ ? दुई महिना पर्खनुस, आउँदैछ अपत्यारिलो सस्तो मूल्यमा
साउदी राजकुमारले अमेजनका मालिकको फोन ह्याक गरेकै हो त ?
नियम विपरित सञ्चालित ५ सहकारी खारेज
किन आकासिँदैछ सुनभन्दा महँगो प्यालाडियमको मूल्य ?
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकाे जारी पूँजी घटाउन पायाे स्वीकृती, १ अर्ब ६० करोडकाे आईपीओ ल्याउँदै
दीपक मनाङे बिरुद्ध एन्फा अध्यक्षले उजुरी हाल्दै